alkisahkasih: Dongeng cindelaras versi bahasa Somalia
Raden Putra waa boqorka Janggala. Waxa uu la socday Haweenay ka mid ah nooc ka mid ah iyo naagtiisii ​​addoonta ah ee quruxda badan. Si kastaba ha ahaatee, naagtiisii ​​addoonta ahayd ee King Raden Putra leeyahay masayr iyo xaasidnimo xagga boqoradda. Isagu waa qorshe xun Empress ah. "Filayaa, waxaan noqday Empress. Waxaan u lahaa in la helo hab in laga takhaluso boqoradda, "ayuu u maleeyey.
Naagtiisii ​​addoonta ahayd boqorka, shirqool la dhakhtar boqornimo. Waxa uu iska xanuun aad u daran. dhakhtar boqortooyada isla markiiba u yeedhay. bogsiiye ayaa sheegay in qof geliyey sunta ee amiirad cabniinka. "Ninkii wuxuu ahaa ahayn King Boqorad qudhiisu ma jiro," ayuu yidhi dhakhtarka. Suaalo cadhoon inay maqlaan sharaxaad ka ladan reer boqor. Waxa uu isla markiiba amar ku bixiyay in la tuuro patihnya Haweenay kaynta.
vizier The grand si degdeg ah loo keenay Empress kii uurka leh waxay cidlada sii dhex maray. Laakiin, patih caqli ma dili lahaa isaga. Sida muuqata patih ay horey u ogaan naagtiisii ​​addoonta ahaydna waxay boqorkii niyad xun ee. "Gabadhii Mr ha ka welwelin, waxaan u sheegi doonaa boqorka in amiirad ayaa addoon u dilaan," ayuu yiri ugaas ah. Si boqorka trick, iyo ugaas ee marsamaysa seeftiisii ​​oo dhiigga bakaylaha la qabsaday. boqorka qaado qanacsan marka ugaas ee wararka sheegaya in uu ku dhintay Empress ah.
dhawr bilood ah isagoo kaynta ka dib, ilmo ku dhashay Empress. Ilmuhu wuxuu la siiyey magaca Cindelaras. Cindelaras koraan galay ilmo waa kan smart iyo qurux. Tan iyo yaraantiisii ​​uu ahaa saaxiib la ah xayawaanka kaynta-deggan ee. Maalin maalmaha ka mid, marka la ciyaaro, aboodiga ah hoos ukun. "Heedhe, gorgorka oo ahaa wanaagsan. Waxa uu si ula kac ah siin ukunta ii. "Seddex isbuuc ka dib, oo ukunteeda ku ukunta. Cindelaras aad u haysaa chicks. chicks The koraan galay fiican ciyey oo xoog badan. Laakiin waxaa jiray nin u laabnayd. oo sanqadha ciyin roosters ahaa run ahaantii la yaab leh! "Kukuruyuk ... gurigiisa dhexe ee kaymaha, saqafka sare ee caleemo timireed, aabbihiis Raden Putra sayidkaygiiyow Cindelaras, ..."
Cindelaras la yaabay si aad u maqasho ee digaagga ciyin oo markiiba tusay hooyadiis. Markaas, hooyadiis Cindelaras ka sheekeeyo asalka ah ee sababta ay u ahaayeen in kaynta. Maqalka story hooyada, Cindelaras go'aamiyo si ay u tagaan xarunta madaxtooyada iyo soo bandhigaan naagood oo addoommo ah ee Boqor xun. Iyadoo loo ogol yahay hooyadiis, Cindelaras tago madaxtooyada Ulasocto diiqii. Marka ee koorsada waxaa jira dadka qaar, kuwaas oo halis digaag. Cindelaras markaas yeedhay by digaag ah penyabung. "Iyadoo aan digaag Kaalay on, haddii aad ku dhici, digaag jantanmu adulah," ayay loolan. "Waa yahay," ayuu ku jawaabay Cindelaras. Marka Guutale, ay muuqato Cindelaras dagaalka diiqii gallantly iyo in waqti gaaban, wuxuu garaaci karaan uu soo horjeeda. Ka dib markii dhawr jeer Guutale, Cindelaras digaag laga badin. digaag waxa uu ahaa runtii adag.
News saabsan weynaanta Cindelaras digaag si deg deg ah ku faafi. Raden Putra ahaa wararka. Markaas, Raden Putra hulubalangnya codsaday in ay ugu yeedhi Cindelaras. "Addoonkiisa jeeda Mudane," ayuu yiri Cindelaras edeb leh. "Wiilku waa qurux iyo caqli, waxa ay u muuqataa inuusan waa farac ka mid ah bayna isu keeneen," boqorkiina wuxuu ku fikiray. Chicken Cindelaras Guutale la digaag Raden Putra la mid xaalad, haddii Cindelaras digaagga lumin markaas diyaar madaxiisa la jarjarey off, wuxuu ahaa, laakiin haddii aad ku guuleysato markaas maalka digaagga Raden Putra badh iska leh Cindelaras.
Laba digaagga ayaa la diriray gallantly. Laakiin wakhti yar oo gaaban, Cindelaras digaag digaag guulaystay Boqorka. dhagaystayaasha The farxo iyo farxo digaag Cindelaras. "Hagaag, waxaan galin soo gaartay. Anigu waxaan wargalin doonaa wixii loo ballanqaaday. Laakiin qofka aad tahay, nin dhallinyaro? "Mar la weydiiyay Raden King ee Putra. Cindelaras isla markiiba ku tashadeen sida wax shawrayey uu digaag. Ma aha sida dheer digaagga isla markiiba ka dhawaajisay. "Kukuruyuk ... gurigiisa dhexe ee hawdka, sayidkaygiiyow Cindelaras,, saqafka sare ee caleen-cawbaar, aabbihiis Raden Putra ...," diiqii baa ciyey joogta ah. Raden Putra yaabiyay Cindelaras ciyin baa ciyey. "Ma runbaa?" Waxay boqorkii ku dhex yaab weydiiyay. "Haa suaalo, magaca addoon Cindelaras, addoonkii Empress ee boqorka hooyadiis."
Isla mar ahaantaana, vizier ee grand si deg deg ah soo food saartay iyo xidhiidhka oo dhan dhacdooyinka in dhab ahaan ka dhacay Haweenay. "Waxaan qalad sameeyay," ayuu yiri King Raden Putra. "Waxaan idin siin doonaa Cadaab kaliya on Murwadayda," boqorkii isagoo cadhaysan ayuu yiri. Markaas, naagtiisii ​​addoonta ahayd waxay Raden Putra waxaa loo musaafuriyay kaynta. isla markiiba Raden Putra isaga hugged iyo raaligelin qaladaad uu Ka dib markii in, Raden Putra iyo saraakiisha ayaa isla markiiba soo gaaray Haweenay kaynta .. Ugu dambeyntii Raden Putra, Empress iyo Cindelaras habeeyaan karo. Ka dib markii Raden Putra dhintay, Cindelaras qaadan meeshii aabbihiis. Waxa uu meesha ka saaray in uu dalka si cadaalad ah iyo si caqli ah.